Posted by pandora at 2:11 AM
အချိန်နည်းနေလို့ ခပ်သုတ်သုတ်လေး တစ်ခေါက်ဖတ် သွားပါတယ် ။ နောက်တစ်ခေါက်လာဖတ်ပါဦးမယ် ။ လောလော ဆယ်ပြောနိုင်တာကတော့ `သိပ်ကောင်းတယ်´ ။ဒီလောက်ပါပဲ ။ :)
ဖတ်ရတာတောင် မ၀ဘူး မပန်... အဆက်ရှိဦးမှာလား
မိုးတွေ တိတ်သွားပြီတဲ့လား အစ်မရယ်....။ တကယ်ဗျာ ဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ...။ ကျွန်တော် အစ်မပို့စ်ကို ဖတ်နေတုန်း Step ရဲ့ Heartbeat ဆိုတဲ့သီချင်းကိုနားထောင်နေတာ...။ ရင်ထဲကို ပိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ၀င်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်...။
ကောင်းပြီးသားကို ကောင်းတယ်လို့ ထပ်ပြောသွားတယ်...း)
မိုးဆိုတာမျိုးကလည်း ရွာချင်တဲ့ အချိန်
ရွာချင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ရွာတတ်တာကိုးလေ... နော..
ဖတ်ပြီး အဆုံးမှာ မောသွားတယ် မပန်ရေ...
အမြန် ဖတ်သွားပါတယ်။ သူ့ဖာသာသူ ရွေးချယ်သွားတဲ့ လမ်းကနေ ခုမှ ဘာလို့ ငဲ့စောင်းချင်ရတာလဲလို့ တွေးရင်း မပန်ရဲ့ ဇာတ်ကောင်အမျိုးသားကို ဒေါသထွက်နေမိတယ်။ အရေးကောင်းတာကြောင့်ရော၊ မပြတ်သားသူများရဲ့ အနာဟောင်းပြန်ဆွတတ်မှုတွေကို ကြားဖူးနေတာကြောင့်ရော ဖြစ်မယ် ထင်ရဲ့။ စိတ်ပျက်စရာ။ အဲသလို စိတ်ဓာတ် မခိုင်မာမှုနဲ့ နိမ့်ကျတဲ့ အကျင့် ရှိသူများကို stupid လို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်
ဒီလိုလူစားမျိုး ပြန်အလာကို (တလွဲ သဘောထားကြီးစွာ) လက်ခံသူများကို more stupid လို့ ခေါ်ရပါလိမ့်မယ်။ မပန်ရဲ့ ဇာတ်ကောင်အမျိုးသမီးရဲ့ ပြတ်သားမှုကို ကြိုက်တယ်။ ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့။ ဘာမှ သနားစရာအကြောင်း မရှိဘူး။
'သတ္တိမရှိသူမှာ အချစ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အချစ်မရှိသူမှာ သစ္စာဆိုတာလည်း မရှိဘူး။'...တဲ့လာ
ရသမြောက်သော စာကောင်းလေးကို ခံစားသွားပါတယ်။ လေးစား အားပေးလျက်ပါ...
အရမ်းကောင်းတယ် ။ အခုအဲဒီလိုမျိုးခံစားနေရတယ် ။ ချစ်သူကလက်ထက်တော့မှာ ... (အခြားသူနဲ့လေ ) ။တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။
အပိုင်းအစများကို ပို့စ်အဖြစ်တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပဲ မပန်.. ဒီလိုအချိန်မှာ ဒီလိုမျိုးပဲ ဆုံးဖြတ် ရမှာပေါ့နော်..ထပ်တူခံစားသွားပါတယ်
သတ္တိမရှိသူမှာ အချစ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး... ဆိုတဲ့ စကားကို “သွေးရူးသွေးတန်း” ရေးမှတ်ခဲ့သော
ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးကြောင့် လက်ခံလိုက်တယ် နော်...
ကျနော်လည်း ဒီလိုမျိုး လေး ရေးတတ်ချင်တယ် ကိုယ့်အကြောင်း ကိုပြန်ပြောနေရတာလည်း မောပြီး ဒါမျိုးလေး ကြိုးစားကြည့်အုံးမယ်း)
Hi Ma Pan
I wrongly considered that this post is not well enough at the first time I read. :)
After reading again today, now, I feel that it's nice. I withdrawal what I had said. :P
မမပန် အရေးအသားကောင်းတယ်။ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ရင်ထဲမှာ ခံစားမှုလေးတစ်ခု တိုးဝင်သွားမိတယ်။
ပန်ရေ… ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ မရတာ ကိုယ်မလုပ်တတ်လို့ ထင်ပြီး တိတ်တိတ်လေးငြိမ်နေမိတာ… ခုလို တင်ပေးလိုက်တော့ ပျော်သွားတာပဲ…
တခါတလေကျတော့ အပိုင်းအစလေးတွေက အပိုင်းအစလေးတွေ အတိုင်းပဲ ကောင်းပါတယ်… ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကြောင့်ပဲ လမ်းခွဲခဲ့ကြပေမယ့် အိမ်ထောင်ရှိယောင်္ကျားတယောက် ဆိုတဲ့ အသိက အရာရာကို ထ်ိန်းချုပ်သင့်တာပေါ့… ရှိဖူးတဲ့သံယောဇဉ်တွေ ကြွင်းကျန်ရစ်ရင်တောင် မသိဟန်ဆောင်သင့်တာပေါ့နော်… အပ်ိုင်းအစလေးတွေကို အပိုင်းအစလေးတွေ အတိုင်းထားပစ်နိုင်တဲ့ ကောင်မလေးက တကယ်အတုယူစရာပါ…
အပြင်ဘက်မှာ တစိမ့်စိမ့်ရွာခဲ့သော မိုးကတော့ အသေအချာကို တိတ်သွားခဲ့ပြီလေ။
ရှိတတ်ဖြစ်တတ်ခဲ့မယ့် အတိတ်ဆိုတာကို သုံးဆယ်ကျော်ငါးနှစ်အတွင်းက
Ma Pan ,that's right time to say good bye.
where did you get that photo, huh?
Did you use the genuine software to edit it? huh? Then don't yell for copyright again. Whatashame!